Hetsika iraisam-pirenena :: Hihemotra amin'ny taona 2021 ny lalao olimpika • AoRaha
Hetsika iraisam-pirenena Hihemotra amin’ny taona 2021 ny lalao olimpika
Niova hevitra ihany ny komity olympika iraisam-pirenena (CIO), efa-bolana mialoha ny tokony hanombohan’ny lalao olimpika any Tokyo (Japana) izay voafaritra amin’ny 24 jolay 9 aogositra ho avy izao. “Hahemotra amin’ny taona 2021 ny lalao Olympika andiany faha-32. Hotazomina ihany ny anarany sy ny tanàna hampiantrano azy”, hoy ny fanapahan-kevitra niarahan’ny filohan’ny CIO, Thomas Bach, sy ny praiminisitra Japoney, Abe Shinzo, omaly maraina.
Ny fanambaran’ny tale jeneralin’ny vondrona maneran-tany ho an’ny fahasalamana (OMS) momba ny fiakaran’ny isan’ireo olona voan’ny Coronavirus mahatratra 370 000 manerana izao tontolo izao no nampirisika ny CIO sy i Japana handray an’io fanapahankevitra goavana io.
Ankoatra izany, ny fiahiana ny fahasalaman’ireo atleta. “Mila tandrovina ny fahasalaman’ireo atleta sy ny mpanao fanatanjahantena rehetra, izay isan’ireo tanjon’ny CIO”, araka ny nambaran’izy ireo hatrany.
Fandrobana teny 67 ha :: Tra-tehaka ny andian-jiolahy mpanafika « cash point »
Fiatrehana ny « Coronavirus » :: Manentana ny Malagasy hanaraka ny fepetra rehetra i Bôlida